Saritaka Noho Ny Fifanekena Hametrahana Biraon’ny Fikambanan’ny Firenena Silamo Any Myanmar · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Novambra 2012 12:16 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, Swahili, Español, Ελληνικά, English
Nahatonga ny firenena sy fikambanana islamika iraisampirenena maro hanolo-tena hitady vahaolana amin'ny famahana olana sy hanampiana ny niharam-boina ny rotaka tamin'ny volana jona tany andrefan'i Myanmar mahatafiditra ny Rohingyas sy ny Rakhine.
Nanome soso-kevitra tamin'ny hametrahana birao maharitra any Myanmar ohatra ny Fikambanam-Piarahamiasa Islamika (OIC). Niteraka fanoherana mivaivay nanerana ny firenena izany fanapahan-kevitra izany, indrindra tany Yangon, Mandalay, Pakkoku, Sittwe ary Phyar Pone. Saiky nitovy hevitra avokoa ihany koa ny hevitra nivoaka an-tserasera amin'ny fanoherana ny fijoroan'ny OIC ao amin'ny firenena.
Maro ny olona any Myanmar no mihevitra fa tsy dia ilaina loatra ny hametrahana ny biraon'ny OIC raha tiana ny hanampy ireo Silamo vitsy an'isa any Myanmar, eny fa na dia ny solontena politika sasantsasany avy amin'ny Rohingya aza dia manao izany koa. Nandresy lahatra[my] ny Dr. Aye Maung, mpikambana parlemantera sady filohan'ny Antoko Fampandrosoana ny Nasionalite Rakhine ary azo atao ny manome fanampiana kanefa tsy voatery hananganana biraon'ny OIC izany:
Resaka ara-pivavahana no tena ijoroan'ny OIC, fikambanana ahitana firenena 57 izay miara-miasa amin'ny firenena Islamika. Tsy mitovy amin'ny ASEAN izay fikambanan-dreniparitra sady maro fivavahana ao aminy ary tsy mitovy amin'ny Vondrona Eoropeana.[…] Ary izay no antony tokony ary ahafahanay mahazo fanampiana mandalo any amin'ny governemanta ary tsy ilàna manokatra biraon'ny OIC.
Nanoso-kevitra ny OIC i Myo hifandray mivantana amin'ny sampan-draharahan'ny Firenena Mikambana hafa sy ny fikambanana tsy miankina raha tsy itokisan-dry zareo ny fomba fiasan'ny governemanta:
Feno ny fiaraha-miasa amin'ny Firenena Mikambana sy ny fikambanana tsy miankina maro isan-karazany amin'i Burma, ka izany no tsy ilana firaisankina ara-politika hafa intsony raha tena hanome sakafo, fialofana, fitsaboana ary fiarovana ny Silamo ihany no tanjon'ny OIC. Izay rehetra tian-dry zareo omana dia azony atao amin'ny alalan'ny Firenena Mikambana raha tsy azo itokisana ny manampahefana Birmana.
Nanoratra i Ko Htike tamin'ny fijery fa tsy nisy nidiran'ny fivavahana ny rotaka, ka noho izany tsy tokony handranitra ny toe-draharaha ho lasa amin'izany ny OIC.
Tsy adim-pivavahana na adim-poko ny olana tamin'ny Rohingya. Olana teo amin'ny mpifindra monina tsy ara-dalàna sy ny fokonolona ihany iny. Olana andavanandro mpitranga any amin'ny firenena maro hafa manerana izao tontolo izao ary iny. Tsy misy zavatra hafa ankoatra izay.
Mieritreritra aho fa tsy tokony handranitra ny toe-draharaha ho ara-pivavahana ny OIC. Hajaiko ny fahatsaram-pony hanome fanampiana. Raha noho ny antony maha-olombelona ilay fikasana, tokony ampiana ny fanjakana sy faritra hafa any Myanmar tahaka izay ataon'ny firenen-kafa (ohatra Japan, Etazonia).
Ko Htike mampiako ny hevitry ny mpiara-belona any Myanmar, manohitra ny tolon'ny Rohingya mitaky azy ireo ho foko iray vitsy an'isa ao amin'ny firenena. Mizara ny hevitra momba ny Rohingyas; ny fiarahamonina iraisampirenena mihevitr azy ireo ho anisan'ny foko tena tratran'ny tsindrihazolena indrindra any Azia.
Naharitra herinandro maromaro ny resaka fa misy ny Fifanekem-pifankahazoana nosoniavin'ny OIC sy ny minisiteran'ny Raharaham-bahiny ao Myanmar, nefa tsy aharenensam-baovao loatra raha misy tokoa izany fifanekena izany, ary raha misy dia inona ny votoatiny. Rehefa raikitra ary ny fanehoan-kevitry ny olona manohitra ilay fifanarahana dia nanazava[my] ny toe-draharaha ny filohan'ny birao, Hmuu Zaw, fa birao vonjimaika fa tsy masoivoho ofisialy. Tsy maro ny resy lahatra tamin'izany fanazavana izany. Tyfone Athene ohatra manontany izay mety ho faharetan'ny fijoroan'ny birao vonjimaika:
Birao mijoro vonjimaika? hafiriana izany? 60 taona sa tsy voafetra?
Poe Pwint Phyu mieritreritra fa raha mijery ny toe-draharaha hatramin'ny voalohany ho tsy adim-pivavahana ny governemanta dia tsy misy antony hanaovana soniam-pifanekena amin'ny OIC:
Fanontaniako farany ho an'ny mpanolotsainan’ Atoa Filoha: jerenareo ho rotaka noho ny fivavahana madiodio ve ilay gidragidra farany teo (ka nahatonga anareo hametraka birao vonjimaika ho an'ny OIC) sa raharahan-tsy firaharahiana miharo herisetra mila vahaolana vonjimaika mametraka ho lasibatra ny Rakhine? Ny valin'izany no manazava ny zavatra ataon'ny governemanta amin'izao fotoana izao sy ny adidy ataony amin'ny Rakhine sy ny sisa niangana amin'ny Firaisana demokratika—ka manan-jò hianatra sy zo mitovy avy amin'ny rafi-panjakana ny zazavavy rehetra.
Mitsikera ny fomba tsy misy mangarahara ataon'ny governemanta ny hafa. Ah Moe manao ity fitakiana ity[my] :
Na birao maharitra io na birao vonjimaika, ny tadiavinay dia ny hampisehoana ny kopian'ny fifanarahana amin'ny vahoaka, izay no takianay amin'ny ankapobeny.
Niezaka nanao izay hampihemotra ny olona tsy handray anjara amin'ny fihetsiketseham-panoherana ny fananganana biraon'ny OIC ihany ny fitondrana; saingy tontosa ihany izany tany amin'ny tanàndehibe maro nanerana ny firenena tamin'ny 15 Oktobra. Niankohoka teo anatrehan'ny faneren'ny olona ny tao amin'ny biraon'ny filoha ka nanambara androtr'io ihany fa tsy hamela ny fananganana ny biraom-pifandraisan'ny OIC ao Myanmar. Tsy nanisy resaka momba ilay fifanekena nampiady hevitra na dia izany aza ny fanambarana. Tsy mazava raha nilaza tamin'ny OIC izany fanapahan-kevitra izany ny governemanta.
Nanome antoka[my] ny vahoaka ny governemanta fa hanaiky ny fanampiana hatrany amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa akaiky amin'ny OIC sy ny vondrona iraisampirenena hafa.
Mandritra izany fotoana izany, nanambara ny OIC fa efa voarain-dry zareo ny filazana avy amin'ny fitondrana ao Myanmar amin'ny tsy famelana ny fananganana biraom-pifandraisana.
Any amin'ny vaovao hafa mifandraika amin'izany ihany, namoaka fanambarana an-gazety ny fikambanana Vokovoko Mena ao Myanmar mandà ny tsaho milaza fa ao amin'ny biraon-dry zareo no misy ny birao miafin'ny OIC.